को सांप को हुन्? तिनीहरूले के खान्छन्? सांप मेट?
सांप - अचम्मको जीव। कारण तिनीहरूले अरूलाई मन पुरा तरिकाले एक अलग demeanor, अनुग्रह र प्राकृतिक सौन्दर्य छ छन् भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो लामो लाखौं मानिसहरू को ध्यान आकर्षित गरेको छ। कि अन्य हातले पूर्ण यी प्राणीहरू मा हेर्न अनुमति अचम्मको तथ्य खोजी, तिनीहरूलाई सुरु रुचि गर्ने व्यक्ति। हाम्रो आजको लेखमा तपाईंले सांप कसरी संभोग गर्न मात्र, तर पनि आफ्नो खाना प्रणाली, उपस्थिति र विशिष्ट सुविधाहरू सिक्न हुनेछ। हामी जानकारी शायद यो पनि डराउन रोक्न तपाईं यी सरीसृप राम्रो बुझ्न मदत, र विश्वस्त छन्।
विश्व को सबै भन्दा शानदार प्रतिनिधिहरु - यो सर्प संभावना छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार। तपाईं पक्कै पनि यस्तो निष्कर्ष लागि मात्र एउटा कारण भनिन्छ गर्न सकिँदैन - यो तिनीहरूलाई केही पहिल्याउन बस पर्याप्त समय छ। को सर्प दन्त्यकथा र व्यक्तिगत राष्ट्रका मिथक धेरै सम्बन्धित भूल छैन। तिनीहरूले यी सरीसृप fearlessness र अनुग्रह, साथै विष को अचम्मको प्रभाव वर्णन। कि यो केहि सेकेन्ड भित्र एक व्यक्ति कसरी मार्न सक्छ, र एक घातक रोग एक दर्जन विरामीहरु बारे निको हुन्छ। सामान्य मा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सांप कसरी जीवनसाथी प्रश्न अलग्गै, धेरै अन्य कुनै कम रोचक छन्। गरेको सुरुदेखि सुरु गरौँ।
सांप लम्बाइमा मीटर सयौं सेन्टिमिटर धेरै दसौं पुग्न सक्दैन। किनभने यो वास्तवमा, धेरै भयावह लागि हो यी सरीसृप तिनीहरूले उहाँलाई अगाडि एक मानिस विशेष गरी भने, आफ्नो "खराब" वर्ण लागि जानिन्छ। तथापि, हामी केही तथ्य थाह पनि छन् भन्दा ठूलो सर्प बिल्कुल सुरक्षित हुन सक्छ, छ छैन विषालु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - विशेषता सुविधाहरू सरीसृप को प्रकार बीच भेद गर्न सक्षम हुन। एक सर्प जीवन span - 20 40 वर्ष पुरानो देखि। तिनीहरूले छेपारो, साना चरा र माछा खान्छन्, आफ्नो छाला बगाएको र बरु peculiar ट्रान्स मात्र सीतनिद्रा सकिन्छ जो मा चिसो प्रवेश मा, न्यानो अवधिमा बरु आदिम जीवन शैली हो। यी सरीसृप चिसो-blooded जनावर भएकोले तिनीहरूले किनभने कठोर जाडो को सीतनिद्रा छैन, तर खाना धेरै कम हुन्छ, किनभने त्यसैले यसलाई सम्भव भोक को मर्न छ।
अब मुद्दा साँच्चै धेरै व्यस्त र रोचक छ किनभने कसरी, सांप मेट बताउनुहोस्। शायद हामी सबै, कि थाहा छैन यो, यी सरीसृप को पुरुषहरु लोकप्रिय रूपमा जानिन्छ बाहिर जान्छ "सबैभन्दा ठूलो सज्जनहरु।" किन धेरै मानिसहरू सांप जीवनसाथी र कसरी रुचि छ। को सरीसृप सीतनिद्रा बाहिर आउन गर्दा र सडक न्यानो दिन आउँदै छन् प्रक्रिया वसन्त, सबैभन्दा अक्सर छ। पुरुष पनि उनको कामुक मालिश आफ्नो सानो नंग्रा बनाउन, एक धेरै लामो समय को लागि महिला "को हेरविचार" गर्न सक्नुहुन्छ। यो तयार हुँदा, उहाँले यो जो 10 सेन्टिमिटर को एक लम्बाइ (यदि सरसृप ठूलो) पुग्न सक्नुहुन्छ दुई जनन, संग impregnates। साथै, सर्प केही दिन, जो पनि मान्छे को लागि प्रक्रिया को ब्याज होइन्छ भित्र मेट गर्न सक्नुहुन्छ। महिला को मल को एक परिणाम भिजेको बालुवा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग नयाँ सन्तान एक हप्ता भित्र प्वाल एक दर्जन अन्डा रूपमा।
रंग - साँप संभोग जस्तै, यो उल्लेख गर्नुपर्छ, कि रोचक तथ्य, र आफ्नो अन्य विशिष्ट सुविधा बाहेक। यो एक विषालु सरसृप तपाईं पनि किनभने यो उज्जवल र थप expressive हुनेछ, रंग निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि विश्वास छ। यो त्यो भनेर खतरनाक मान्छे भन्नुहुन्छ, र यो विचलित हुनुपर्ने। एकदम स्वाभाविक, सबै थाहा सांप को प्रकार र तिनीहरूलाई बीच भेद गर्न सक्षम हुन असम्भव छ। बिजुली बत्ती, सर्प, अजगर, कोबरा, सांप: तथापि, सबै भन्दा साधारण हुन्छन् भेद गर्न बेहतर। तसर्थ, पहाड जाने चाहने, के सांप यस क्षेत्रमा पाइन्छन् पत्ता, र तिनीहरूले मानिसहरूलाई खतरनाक छन् कि।
Agama काकेशस: विवरण र वासस्थानमा
"वास्" -Animals। otnorki के हो?
Alder रूख - एक अपरिहार्य चिकित्सा र जीवित ऊर्जा प्राथमिक स्रोत
जामुन को कटाई गर्दा rosehips संकलित?
फोटो र विवरण: को Owls प्रजाति। ध्रुवीय र सेतो उल्लू: texte
Sozh नदी - बेलारुस मा सबै भन्दा सुन्दर नदी को एक
मास्को सर्कस Tsvetnoy Boulevard मा: कथा, समीक्षा, निर्देशन, फोटो
कोठा violets गर्न माटो को आवश्यक संरचना
BIOS कसरी अपडेट गर्न सिक्ने
"सौन्दर्य र जनावर": चलचित्र वर्ण। पूर्ण सूची
पंख संग कपडे: असाधारण अवस्थामा लागि विदेशी हावा
Mirena IUD - गर्भनिरोधक को क्षेत्र मा एक क्रान्तिको
विन्डोज लक गरिएको, एसएमएस पठाउन
ओवन मा पाकेका माछा। सरल र स्वादिष्ट खाने
मास्को मा पीट bogs जल। किन पीट बाल्न?
कसरी आफ्नै हातले आफ्नो हजुरबुबा जन्मदिन एक उपहार बनाउन
Diogen Laertsky: जीवनी, लेखोटहरू, उद्धरण